Maitiro Ekugadzira Webhusaiti, Ecommerce, Kana Mashandisirwo Emavara Schemes | Martech Zone
Takagovera zvinyorwa zvishoma pamusoro pekukosha kweruvara maererano nerudzi. Kune webhusaiti, ecommerce saiti, kana nharembozha kana webhu application, zvakangokoshawo. Mavara ane zvaanoita pa:
Maonero ekutanga emhando uye kukosha kwayo - semuenzaniso, zvinhu zveumbozha zvinowanzo shandisa dema, tsvuku zvinoreva kufara, nezvimwe.
Kutenga zvisarudzo - kuvimba kwechiratidzo kunogona kusarudzwa nekusiyana kwemavara. Zvirongwa zvemavara zvakapfava zvinogona kuve zvechikadzi uye zvakavimbika, misiyano yakaoma inogona kuve yekukurumidzira uye inofambiswa nekuderedzwa.
Kushandiswa uye ruzivo rwemushandisi - mavara ane pfungwa uye physiological kukanganisa zvakare, zvichiita kuti zvive nyore kana zvakanyanya kuoma kufamba mushandisi interface.
Rudzi Rwakakosha Sei?
85% yevanhu vaiti ruvara rune simba guru pane zvavanotenga.
Mavara anowedzera kuzivikanwa kwemhando neavhareji ye80%.
Kuonekwa kwemavara ndiko kunokonzera 60% yekugamuchirwa kana kurambwa kwechigadzirwa.
Kana uchisarudza chirongwa chemavara chewebhusaiti, pane mamwe matanho akatsanangurwa mune inoperekedza infographic:
Chekutanga Ruvara -Sarudza ruvara runoenderana nesimba rechigadzirwa chako kana sevhisi.
Action Colors -Izvi hazvipo kubva pane infographic pazasi, asi kuona yekutanga chiitiko ruvara uye yechipiri chiito ruvara kunobatsira zvakanyanya. Inodzidzisa vateereri vako kuti vatarise pane chaiyo mushandisi interface zvinhu zvinoenderana nemuvara.
Aokuwedzera Colors - Sarudza kuwedzera mavara anoenderana ruvara rwako rwekutanga, runako mavara anoita ruvara rwako rwekutanga Pop.
Background Colors -Sarudza ruvara rwekumashure kwewebhusaiti yako - pamwe ine hukasha pane yako yekutanga ruvara. Ramba uri murima uye chiedza mode mupfungwa zvakare.. nzvimbo dzakawanda uye dzakawanda dziri kubatanidza zvirongwa zvemavara pane chiedza kana rima mode.
Typeface Colors -Sarudza ruvara rwemavara anenge ari pawebhusaiti yako - yeuka kuti yakasimba nhema typeface haiwanzo uye haina kukurudzirwa.
Somuenzaniso, kambani yangu Highbridge yakagadzira mhando yepamhepo yemugadziri wemapfekero aida kuvaka yakananga-kune-vatengi ecommerce saiti apo vanhu vanogona tenga madhirezi online. Isu takanzwisisa vateereri vedu, kukosha kwemhando, uye - nekuti mhando yacho yaive yakanyanya kudhijitari asi zvakare yaive nechigadzirwa chemuviri - isu takatarisa pane zvirongwa zveruvara zvakashanda zvakadhindwa (CMYK), machira emachira (Pantone), pamwe chete. digital (RGB uye Hex).
Kuedza Chirongwa Chemavara Nekutsvagisa Kwemusika
Maitiro edu ekusarudza kwedu color scheme aive akasimba.
Isu takaita tsvakiridzo yekushambadzira pane dzakateedzana mavara ekutanga nevateereri vedu vataida izvo zvakatidzikisa kune rumwe ruvara.
Isu takaita tsvakiridzo yekushambadzira pane akateedzana esekondari uye epamusoro mavara nevateereri vedu vatakatarisana navo kuti kwatakadzikisira zvimwe zvirongwa zvemavara.
Isu takaita zvigadzirwa mockups (chigadzirwa kurongedza, mitsipa tags, uye ma tags akarembera) pamwe ne ecommerce mockups ane mavara emavara uye akapa iwo kune mutengi pamwe nevateereri vanotarisirwa kuti vapindure.
Nekuti mhando yavo yainyanya kuenderana nemwaka, isu takabatanidzawo mwaka musanganiswa mavara. Izvi zvinogona kuuya zvine mutsindo kune chaiwo kuunganidzwa kana zvinoonekwa zvezviziviso uye zvemagariro media share.
Isu takapfuura nekuita uku kanopfuura hafu yegumi nembiri tisati tagadzirisa chirongwa chekupedzisira.
Nepo mavara emhando ari akajeka pink uye rima grey, isu takagadzira iyo chiito mavara kuva mumvuri wegirinhi. Green ivara rine chekuita-saka yaive sarudzo yakanaka kukwevera maziso evashandisi vedu kuzvinhu zvine chekuita nekuita. Isu takabatanidza iyo inverse yegirinhi kune edu echipiri zviito (yegirini muganho nechena kumashure uye zvinyorwa). Isu tiri kuyedza zvakare rima rakasvibira regirinhi pane chiito ruvara kune hover zviito.
Kubva isu tichangobva kutanga saiti, takaisa mbeva-yekutevera uye kupisa mepu kuti titarise zvinhu izvo vashanyi vedu vanokweverwa kwazviri uye kudyidzana nazvo zvakanyanya kuti tive nechokwadi chekuti tine hurongwa hweruvara husingangotaridzike zvakanaka… hunoita nemazvo.
Colors, White Space, uye Element Characteristics
Kugadzira chirongwa chemavara kunofanirwa kuitwa nguva dzose nekuchiyedza mune yakazara mushandisi interface kuti uone kudyidzana kwevashandisi. Kune iyo saiti iri pamusoro, isu takabatanidzawo chaiwo miganho, padding, maratidziro, muganhu weradius, iconography, uye typefaces.
Isu takaunza yakazara branding gwara rekuti kambani igovere mukati kune chero kushambadzira kana zvigadzirwa zvechigadzirwa. Kuenderana kwema brand kwakakosha kukambani iyi nekuti ivo vatsva uye havana ruzivo muindasitiri panguva ino.
Heino Inoguma Ecommerce Saiti ine Ruvara Scheme
Closet52 Peji Yemba
Closet52 Collections Peji
Closet52 Chigadzirwa Peji
Kushandiswa Kwemavara uye Kupofumadza Kwemavara
Usakanganwe usability bvunzo yekusiyana kwemavara pazvinhu zvesaiti yako. Unogona kuyedza chirongwa chako uchishandisa iyo Webhusaiti Yekuyedza Chishandiso. Nechirongwa chedu cheruvara, tinoziva kuti isu tine nyaya dzekusiyanisa dzatichange tichishanda munzira, kana isu tingatove nesarudzo dzevashandisi vedu. Sezvineiwo, mikana yemavara nenyaya nevateereri vedu yakadzikira.
Upofu hwemavara kusakwanisa kuona misiyano pakati pemamwe mavara ayo vashandisi vasina mavara vanogona kusiyanisa. Rudzi upofu hunokanganisa pamusoro mashanu kusvika masere muzana evarume (vanenge mamiriyoni 10.5) uye vasingasviki chikamu chimwe kubva muzana chevakadzi.
Chikwata chiri paWebhusaitiBuilderExpert chakaisa pamwechete iyi infographic uye yakadzama inoperekedza chinyorwa pa Maitiro Ekusarudza Ruvara rweWebhusaiti Yako ndizvo zvakanyatsojeka.
Tags: chiito mavaramavara ekumashurebrand mavaradaidza kune chiito chevaracloset52ruvaracolor colorzvirongwa zvemavaraecommerce colorecommerce color schemenzira yekuedza mavarakutsvakurudza misikamobile app color schememavara ekutangamavara echipirisarudza mavaramavara epamusorokuedza chirongwa chemavarakuedza zvirongwa zvemavaratypeface mavaramushandisi interface dhizainiweb Designwebsite web design